NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်ဗေသလမီဒီယာ Facilis ထံမှအကူအညီနှင့်အတူဘုရားကျောင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဘဝမှကယျတငျ
Home » သတင်း » ဗေသလမီဒီယာ Facilis ထံမှအကူအညီနှင့်အတူဘုရားကျောင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဘဝမှကယျတငျ
ဗေသလမီဒီယာ Facilis ထံမှအကူအညီနှင့်အတူဘုရားကျောင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဘဝမှကယျတငျ
Hudson, MA (ဇွန်လ 24th, 2019) - Facilis, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကွန်ရက်များအဘို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ဗေသလမီဒီယာ ရွေးချယ်တော်မူပြီ Facilis အဆိုပါတောင်းဆိုမှုများအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိုထောကျပံ့ဖို့ shared သိုလှောင်မှုက၎င်း၏ On-demand streaming ဝန်ဆောင်မှု၏ဗီဒီယို, ဝက်ဘ်, လက်လီနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကနေတဆင့်ဘုရားကျောင်းရဲ့အဝေးရောက်ထောက်ပံ့ workflows ။
Redding ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်, ဗေသလမြို့ဘုရားကျောင်း 11,000 ကျော်ကလူတစ်ဦးအသင်းတော်နဲ့ non-ဂိုဏ်းဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ဗေသလမီဒီယာဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်၏ကြီးမားသောသင်္ဘောသားများထံမှပြောင်းလဲနှင့်ဝန်ထမ်းများ supporting တနင်္ဂနွေဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အပိုဆောင်းအပြင်ဘက်အကြောင်းအရာဖမ်းဆီးဖို့ငှါး၏။ ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာကြီးထွားဖို့ဆက်လက်နှင့်ဓမ်မအမှုသိသိသာသာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်တစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဗေသလမြို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်များ, တနင်္ဂနွေန်ဆောင်မှုများနှင့်စီမံကိန်း-based အကြောင်းအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုဖန်တီးရန် "အိမျတျော၌" အရင်းအမြစ်များကိုရောက်စေဖို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, တနင်္ဂနွေန်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များဖမ်းမိထုတ်လုပ်မှုအသင်းကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောမီဒီယာ stand-alone hard drive တွေနှင့်အမျိုးမျိုးသော NAS ယူနစ်ပေါ်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်မှာဗေသလမြို့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကွမ်တမ် သိုလှောင်မှု။ သူတို့ကအမြန်နှုန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပေမယ့်စံပြမဟုတ်ခဲ့ပေ။ "ဒီ ကွမ်တမ် သိုလှောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ပတ်သတ်ပြီးနှင့်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပိုမိုတင်းကျပ်နှင့်လျော့နည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခဲ့တယ်, "Jake Watkins ဗေသလမီဒီယာမှာ Video Editor ကဆိုသည်။ "ဒါဟာလည်းလူတိုင်းအတွက် Fiber Channel ကိုဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဌာန၌အကြှနျုပျတို့၏အယ်ဒီတာများနှင့်သက်ဆိုင်သူများအပေါငျးတို့သအစေခံနိုင်ကြောင်းအသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများရှာနေတော့တာပဲ။ သူတို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, နေရာတိုင်းမှာ, ဆက်သွယ်မှုအမျိုးမျိုးကျော်ကွဲပြားခြားနားသောအသင်းများအားဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းဗဟိုသိုလှောင်မှု Wanted ။ "
သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိဘယ်မှာဖြေရှင်းချက်များအတွက်ရှာဖွေရေး Las Vegas မှာ NAB ဖို့အသင်းကိုယူ Facilis။ "ဘာကိုတကယ်ငါ့ကိုအထင်ကြီး၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခဲ့ Facilis - ငါတို့သည် Fiber အပေါ်လူတိုင်းမလိုအပ်ခဲ့ပါဘူးနှင့် 16Gig မှာချိတ်ဆက်လူတိုင်းမလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး, "Darrell ဟေးလ်, ဗေသလမီဒီယာကွန်ယက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "နှင့် Facilis စနစ်, ငါတို့သည်လည်း Ethernet ကိုသုံးပါနှင့်ပင် Low-bandwidht ကို Wi-Fi ချိတ်ဆက် browsing အတွက်မီဒီယာအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးရှိနိုငျတယျ။ ဤသည်ကိုမြေတပြင်လုံးကုမ္ပဏီအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပ်ပေးတော်မူ၏။ ယခုငါတို့ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အခွင့်ထူးတစ်ခုသင့်လျော်သောအဆင့်မှာစီမံခန့်ခွဲခံရလူတိုင်းနှင့်အတူ system ပေါ်တွင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကောင်းစွာသောကြောင့်အယ်ဒီတာများရှိနိုင်ပါသည်။ "
ဗေသလမြို့ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူကြာမြင့်စွာကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ် Key ကို Code ကိုမီဒီယာယခင်ကတပ်ဆင်ခနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း Workflows ဘို့မိမိတို့အကွံဉာဏျအပေါ်မှီခိုဘဲလျက်။ Keycode ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကောင့်မန်နေဂျာရှိန် Scarbrough, options ကနေတဆင့်ဗေသလအဖွဲ့သွား လာ. , သူတို့၏ပေးပို့ယူ Facilis dual-256EX ဆာဗာများနှင့်အတူနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဒီဇင်ဘာလ-တစ် 24TB Hub Stack အတွက်စနစ်။ "လက်ရှိ 32 တီဘီတစ်ဦးစုစုပေါင်းအဘို့ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ချက် 16 drives တွေကိုမှတက်ကိုင်နိုင်သည့်နှစ်ခုဝင်ရောက်စီးနင်းကိုယ်ထည်ဝယ်ပေမယ်သာတစ်ဦးချင်းစီအတွက် 256 drives တွေကိုလူနေထူထပ်ပါတယ်," Watkins ကဆိုသည်။ "ဒါဟာကျနော်တို့ကြီးထွားဖို့အခန်းတစ်ခန်းရှိကိုသိရန်ကောင်းပါတယ်။ "
ဗေသလအဖွဲ့အထင်ကြီးအခြားအင်္ဂါရပ်များကစွမ်းရည်နှင့်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည် Facilis သူတို့ရဲ့အဟောင်းပေါင်းစည်းဖို့န်ထမ်း ကွမ်တမ် ယင်းသို့သိုလှောင်မှု Facilis shared ဖိုင်မှတ်တမ်းစနစ်။ "သူတို့နေဆဲတန်ဖိုးကိုခဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဟောင်းတွေ drive ကို Array ကိုအမှိုက်ချင်ကြဘူး," ဟေးလ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ "Facilis ယင်းသို့ဤသိုလှောင်မှုပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တယ် Facilis ဖိုင်မှတ်တမ်းသည့်စနစ် shared နှင့်အသစ်သောသိုလှောင်မှုနဲ့အတူ clients များကလက်လှမ်းစေ။ ဤသည်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကယ့်ကိုအတူသွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မြဲ Facilis။ "
ဗေသလမီဒီယာဖြစ်ရပ်ပေါ် မူတည်. မတူညီသောဆုံးဖြတ်ချက်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရိုက်။ တနင်္ဂနွေန်ဆောင်မှု BMD URSA Mini ကို Pro ကိုကင်မရာများအပေါ်ပစ်ခတ်နေကြသည်နှင့်အကြောင်းအရာအများစုမှာသေနတ်ဖြစ်ပါတယ် HD Apple ရဲ့ ProRes 422 သို့မဟုတ် HQ codec ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပို. ပို. ပို. 4K အလုပ်အမှုကိုပြုလျက်ရှိသည်, သူတို့သည်ဂီတဗီဒီယိုရိုက်ကူးအခါတိုင်း, က Pro ကို Res XQ သုံးပြီး 4K မှာပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် Adobe Premiere Pro ကိုအတူဖြတ်တောက်မှုနှင့် BMD ဖြေရှင်းရန်နှင့်အတူအချို့သောပြီးပါဘူး။ အားလုံးအသံပို့စ်ပြု လွန်စွာလိုလားသော ProTools ။
နယူးစာချုပ်များ, Feature ကိုရုပ်ရှင်နှင့် Big ပွဲများ
ဗေသလမီဒီယာမကြာသေးမီကတရားဒေသနာနှင့်မော်ကွန်းတင်န်ဆောင်မှုများင်း၏စာကြည့်တိုက်ကနေဂီတကိုးကှယျမှုအကြောင်းအရာများကို TBN (သုံးပါးတစ်ဆူအသံလွှင့်ကွန်ယက်) နှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဗေသလမြို့ဂီတနှင့်ကိုးကွယ်မှုဦးသောအကြောင်းအရာများကိုလည်း TBN မှထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Facilis စနစ်က TBN ဘို့ချည်နှောင်လျက်အကြောင်းအရာ၏တည်းဖြတ်ရေးနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုနေပါသည်။
ဗေသလ Music ကိုဗေသလအရပ်မီဒီယာအဖွဲ့လည်းလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ ပြောင်လက်တောက်ပသောသူများကိုလူငယ်ပရိတ်သတ်များအတွက်ရည်ရွယ်တာကသူတို့ရဲ့ဒုတိယစီမံကိန်းကို။
ဗေသလမြို့ဂီတမကြာသေးမီက 3-in ကိုလာကြမယ့် 2019 ရက်ကြာညီလာခံဖြစ်ရပ်-ကောင်းကင်ဘုံကျင်းပ Los Angeles မြို့ အဆိုပါ LA ကတိုက်ရိုက် Microsoft ကဇာတ်ရုံမှာမှာ။ ဗေသလဂီတထုတ်လုပ်မှုအမှုထမ်း 4K မှာအနီရောင်ကင်မရာများနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ရပ်ရိုက်ကူး။ ဖြစ်ရပ်ကနေဆင်းသက်လာအားလုံးအကြောင်းအရာပေါ်သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါပြီ Facilis တည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက်စနစ်။
"ကျနော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါချိတ်ဆက်ထား 12-15 client များအကြားရှိ Facilis ဗေသလမီဒီယာနှင့်ဗေသလမြို့ဂီတနှစ်ခုစလုံးမှာကွဲပြားခြားနားသော Workflows သုံးပြီးနှင့်အတူ "Watkins ကဆိုသည်။ "ဗေသလမြို့ Music ရဲ့ဖန်တီးမှုအသင်းကသာဒါတစ်ဦး shared သိုလှောင်မှုကွန်ယက်တွင်အလုပ်လုပ်နေသူတို့နှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေအရာကသူတို့အသင်းအဘို့အသစ်တစ်ခုအယူအဆဖြစ်ပါသည်, အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့မိမိတို့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်စနစ်များအပေါ်ဒေသခံ hard drive တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗေသလမြို့ဂီတမကြာသေးမီကအသစ်တခုအယ်လ်ဘမ်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်နှင့်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့ကလမ်းအပေါ်မျိုးစုံဖျော်ဖြေပွဲဖမ်းမိ။ သူတို့ဟာကနေဆွဲထုတ်ဖို့အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါအရာအားလုံးကိုရှိခြင်းချစ်ကြတယ်။ "
ဖြည့်စွက်ကာ Facilis သိုလှောင်မှု shared, ဗေသလအဖွဲ့ LTO archive ကိုမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် StorageDNA များအတွက် CatDV အသုံးပြုသည်။ "ဗေသလမြို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကွယ်ခြင်းဂီတနှင့်သွန်သင်ချက်များအတွက်အများဆုံးလူသိများသည်။ ဗေသလမီဒီယာရဲ့အာရုံစိုက်အားလုံးတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ကမ္ဘာကြီးကိုထွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအကြောင်းအရာရတဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်တယ်, အဲဒီကိရိယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပတ်စဉ်လုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း, "ဟေးလ်ကပြောပါတယ်။ "ဒါကြောင့်ဝေး, အ Facilis system ကိုကျနော်တို့ကမှာပစ်ဆိုစိန်ခေါ်မှုကိုင်တွယ်နိုင်တယ်။ "
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-06-25
ယခင်: စပိန်အတွက်ဝိပဿနာတီဗီမိတ်ဆက်သည့် ahi + အားကစားဝန်ဆောင်မှုအပေါ်
နောက်တစ်ခု: Densitron display ကို module ကို mount အသစ်အမြင့်မားတဲ့ resolution ကိုထိန်သိမ်းမိတ်ဆက်